Puntland oo xiriirka u jartay Dowladda Federalka Soomaaliya – Somali Top News
Puntland oo xiriirka u jartay Dowladda Federalka Soomaaliya
Qoraal af-English ku qoran oo Puntland u dirtay Beesha caalamka iyo dalalka daneeya Soomaaliya, ayay ku sheegtay in ay joojisay dhamman arrimihii ay ka wada-shaqeynayeen dowladda FederaalkaSoomaaliya sida; dib u-eegista Dastuurka, qorshaha amniga Qaranka iyo hannaanka doorashooyinka dalka ee 2020/2021.
Maamul goboleedka Puntland ayaa sidoo kale sheegtay in aysan aqoonsan doonin, dhammaan shuruucda ay meel-mariyeen golayaasha dowladda Federaalka Soomaaliya sida; Sharciga doorashooyinka , sharciga shidaalka iyo xeerka canshuuraha dalka oo ay sheegtay in aan lagala tashan.
Qoraalka ay Puntland soo saartay oo dheer ayaa looga sheekeeyay shirkii fashilmay ee Garoowe, waxaana Puntand ugu baaqday dowladda Federaalka iyo maamul goboleedyada dalka in shirar kale. lagu kulmo, si heshiis looga gaaro qodobada salka u ah khilaafka labada dhinac.
#Somalia: Puntland Government Policy Statement on Failed Political Negotiations in Somalia (1) pic.twitter.com/Yeaa03URrK
— Vates Corp (@Vatescorp) May 26, 2019
← Abyi Axmad oo meel marineysa qorshihii Meles Zenawi uu u dejiyay Soomaaliya
Ethiopia apologises for map that erases Somalia →
Cali Khaliif Galeyr Oo Xal U Raadinaya Joojinta Dagaalka Tukaraq
Muwaadin Soomaaliyeed oo laga sii daayay maxkamad ku taala Mareykanka